Telefaona vaovao roa ho an'ny LG: X Cam sy X Screen | Androidsis
Herinandro lehibe ho an'ny tsena Android miaraka amin'ny Mobile World Congress efa hanomboka ary andiana mpanamboatra andiany lehibe izay hanolotra ny faran'izay tsara indrindra amin'ny taona. Daty manokana sy tena manandanja amin'ity taona ity izay hahitana ny tarehy roa amin'ireo mpanamboatra izay manandrana mijanona eo alohan'ireo terminal rehetra tonga miaraka amin'ny hevitra raikitra fa, raha hanolotra traikefa Android tsara dia tsy mila avo lenta ianao, fa amin'ny fitaovana tsy mihoatra ny 100 €, dia azon'ny mpampiasa atao daholo ny tadiavina. dia fakan-tsary tsara, CPU ahafahana mandefa tambajotra sosialy tsy misy olana ary efijery izay manana vahaolana 1080p tsara.
Izao dia ny LG izay, andro vitsy taorian'ny MWC, dia namoaka ny filokana roa vaovao ho an'ny elanelam-potoana, ny LG X Cam sy X Screen. Telefaona vaovao roa ho an'ny elanelana mitovy ny vidin'ny fivarotana nefa samy manana ny tanjony ny anarany samy hafa. Ny X Cam dia manana ny antony mahatonga azy io ho sary ary io indrindra dia satria misy fakantsary roa ao ambadika, ny iray amin'ireo MP 13 ary ny iray an'ny 5MP. Ny X Screen dia mifototra amin'ny fananana efijery faharoa 520 x 80 amin'ny famahana ary izany dia hanana kalitao afaka manolotra topy maso tsotra sy haingana mba hahitanao ireo fampandrenesana tonga amin'ny telefaona ary raha tena tsy maintsy mihodina isika amin'ilay lehibe.
Fitaovana iray foronina manokana ho an'ny sary araka ny anarany, ary tsy mitovy amin'ny LG K10 vaovao amin'ity lafiny manokana ity. Izany dia vokatry ny fananana fakan-tsary roa ao aoriana miaraka amina MP 13 sy sensor 5 megapixel iray hafa. Eo anoloana dia ahitantsika fakan-tsary 8 MP, izay raha fintinina dia mametraka an'ity telefaona ity amin'ny iray manokana ho an'ireo selfie lamaody. ny combo fakan-tsary indroa Nampiasaina sy naseho teo aloha izy io mba hanampiana effets sasany amin'ny kalitaon'ny sary.
Anisan'ireo fiasa miavaka indrindra amin'ny fitaovan'ity finday ity a octa-core chip dia niorina tamin'ny 1.14 GHz izay tsy fantatsika ny marika sy ny maodeliny, RAM 2 GB ary tahiry anatiny 16 GB. Ny efijery 5,2-inch dia manana vahaolana feno HD 1080p. Ny bateria dia mahatratra hatramin'ny 2.520 mAh ary manolotra fanampiana ho an'ny LTE. Izy io dia manana kinova efatra amin'ny loko: volafotsy titanium, fotsy, volamena ary mavokely.
Na dia afaka mieritreritra mora aza isika fa miatrika terminal misy fiheverana manokana ny efijery lehibe isika, azo antoka fa marina izy, saingy tsy noho ny kalitaony, fa noho ny tonga miaraka amin'ny lisea. Ity sekoly ambaratonga faharoa ity dia hiandraikitra ny fampahafantarana antsika raha manana fampandrenesana isika ary raha tokony hivadika ilay lehibe.
Miatrika a telefaona kely kokoa miaraka amin'ny efijery 4,3 inch misy vahaolana HD. Ny efijery faharoa dia ilay iray izay mandray ny ampahany amin'ny fitiavana amin'ny fampitaovana mba hanolorana azy ho telefaona hafa amin'ny LG hafa izay manana vahaolana 520 x 80 LCD. Tolo-kevitra mahaliana iray nataon'ny LG hanamarihana ity fitaovana ity ho iray tsy mitovy amin'ny hafa ary hanana fiheverana manokana ho an'ireo mpampiasa te hanana tontonana faharoa fa tsy endrika fakantsary mifantoka kokoa amin'ny sary toa ny X Cam.
Amin'ireo sisa voafaritra, ny Ny efijery X dia kely kokoa noho ny X cam amin'ny lafiny sasany. Ny processeur dia quad-core amin'ny 1.2 GHz, na dia manana RAM 2 GB aza. Manana fakantsary aoriana 13 MP ihany izy io, na dia manana MP 8 aza ny eo aloha. Ny fitehirizana anatiny dia 16GB ary ny bateria dia somary ambany kokoa amin'ny 2.300 mAh. Safidy telo ho an'ny loko: volamena mainty, fotsy ary rose.
Ireo terminal roa dia hanana Android 6.0 Marshmallow ary izahay tsy mahalala na inona na inona momba ny fahaizany microSD. Ho hita eny amin'ny tsena lehibe any Azia, Eropa ary Amerika Latina izy ireo amin'ny volana ho avy. Hanana ny fampahalalana rehetra ho an'ny Kongresin'ny World Mobile isika afaka andro vitsivitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » LG » LG dia manambara ny LG X Cam sy X Screen alohan'ny MWC